RASMI: Fernandinho oo heshiis cusub qallinka ugu duugay Manchester City – Gool FM
(Manchester) 28 Jan 2020. Kooxda Manchester City ayaa qandraas cusub oo hal sano ah ku abaalmarisay ciyaaryahankeeda qadka dhexe ee Fernandinho.
Heshiiska cusub ee uu saxiixay xiddigan reer Brazil ayaa ka dhigan in in Man City uu sii joogi doono tan iyo sanada 2021, waqtigaaso noqoneysa xilli ciyaaredkiisii 8-aad Ee City .
Si weyn ayuu ugu raaxeystay waayihiisa Etihad, kaddib markii uu la qaaday Man City, 3 horyaalka Premier League ah, FA Cup, iyo 4 Carabao Cup, iyadoo uu ka soo muuqday kooxdiisa 299 kulan dhaman tartamada.
Kaddib heshiiska cusub ee uu saxiixay ayaa Fernandinho waxa uu sheegay in uu sii wadi doono guulaha uu la gaarayo kooxdiisa.
“Kani waa qabarkii ugu fiicanaa macquulgalna ahaa, waxaan rabaa inaan tani u qaado fursad aan ku sameyn karo rikoodho, waxaan rabaa in aan u mahadceliyo saaxibadeyda aan isku kooxda nahay iyo shaqaalaha City. Iyaga la’aantooda heshiiskan macquul ma noqon laheen, marka qof walboo ka tirsan waan u mahadcelinayaa waqti kasta”.
“Taageryaasha kooxdeena waa kuwo aan la aamini karin, marka waan ku faraxsanhay in sanad kale aan u sii ciyaaro. Waxaan diirada saari doona in aan sii wado guulaha.
Sidoo kale agaasimaha ciyaaraha ee Man City Txiki Begiristain oo soo bandhigida heshiiska cusub ee Fernandinho qeyb ka ahaa ayaa si weyn u amaanay xiddiga reer Brazil.
Jurgen Klopp oo sheegay kulamada uu Sadio Mane ka maqnaan doono Liverpool